I-charmer yama-1950 imizuzu kuphela ukusuka ku-I40 - I-Airbnb
I-charmer yama-1950 imizuzu kuphela ukusuka ku-I40
Lilungiswe ngokuphelele ikhaya lango-1950 elinezinhlamvu eziningi nobungcweti bangempela, elitholakala kuphela imizuzu emi-3 ukusuka e-I40 kanye nemizuzu engama-20 noma ngaphansi kwezinye zezimpophoma ezinkulu kakhulu esifundazweni sase-TN.
Leli khaya elihle lalungiswa kabusha ngokuphelele ngo-2017 futhi lifaka ukhuni lwangempela oluqinile, i-shiplap, imiba yeminyango nokunye. Ikhishi elikhanyayo nelinomoya, elisebenza ngokugcwele lihlanganisa izinto ezintsha sha zensimbi engagqwali, ibhodwe lekhofi, ishelufu elivulekile kanye netafula lokudlela elihlala abantu abangu-6. Igumbi lokulala elilodwa lihlanganisa umbhede olingana nendlovukazi kanye negumbi lokulala elingu-2 linombhede ophelele kanye nengubo enkulu yokugqoka. Igumbi lokugezela elihle elinesibuko esikhulu kanye neshawa yamathayela esitimela esingaphansi.
Uzothola ukunethezeka endlini yokuphumula nge-TV yesikrini esiyisicaba (idivayisi yokusakaza ye-Roku, isidlali se-DVD, asinakhebula) kanye nosofa othokomele nesihlalo sothando. Igumbi elikhulu lelanga lifaka iwasha nesomisi elinendawo yehhovisi kanye nedeski elikhulu. Buyela emuva egcekeni elikhulu lapho ungawosa khona ama-smore eduze kwendawo yomlilo. Ukubuyela emuva kuzoholela ngisho nasemhumeni omncane uma uzizwa unamandla.
4.94 · 338 okushiwo abanye
Kutholwe imizuzu nje ukusuka ku-I40, umugqa wokudlela kanye nenhliziyo yeCookeville. Ibanga elifushane ukusuka eBurgess Falls naseWindow Cliffs.
Ikhodi engukhiye iyatholakala ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuhlala kwakho.